Ronaldo oo dhunkaday gabar Model ka sameysa Waa tee Midaas (Daawo Muuqaal). | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ronaldo oo dhunkaday gabar Model ka sameysa Waa tee Midaas (Daawo Muuqaal).
Ronaldo oo dhunkaday gabar Model ka sameysa Waa tee Midaas (Daawo Muuqaal).
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-08-16 1:01 PM Hogaamiyaha xulka Portugal ayaa fasax dheeraad ah ku qaadanaya dalka Mareykan ka kadib markii uu xulkiisa ka caawiyay iney ku guuleystaan Euro 2016. Portugal koobka ay qaaday ee Euro 2016 waa midkoodii ugu horeeyey oo ay ku guuleystaan.
Hogaamiyahaan ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan dunida ayaa la kulmay dad badan oo ay ka mid tahay fanaanadda caanka ah ee Jennifer Lopez, balse markaan waxaa laga soo calaameeyay lana soo helay sawiro muujinaya inuu xiriir wacan la leeyahay gabadha Modelka ah ee Cassandre Davis.
Camera da ayaa qabtay CR oo madaxa ka Shuminayo waqti fiicanna la qaadanaya gabadhaan caanka ah ee dharka xayeysiisa, waxeyna waqti fiican ku wada qaateen Miami oo uu dalxiis u joogo CR7.